Ha Tunnel Pro Apk Download Ho an'ny Android  | APKOLL
Salama daholo, eto izahay miaraka amin'ny rindranasa Android, izay fantatra amin'ny anarana hoe Ha Tunnel Pro. Vpn izy io, izay manolotra anao hanova ny toerana sy ny adiresy IP an'ny fitaovanao Android. Manolotra fiarovana avo lenta sy zavatra maro hafa koa izy io.
Araka ny fantatrao, tsy dia atahorana loatra ny fitetezana Internet amin'izao fotoana izao, mpijirika taonina maro no miandry anao hanao hadisoana kely ary ny angon-drakitrao rehetra dia misy tahirin-kevitra manokana sy matihanina izay haseho amin'izy ireo. Ka azonao atao ve ny mijanona tsy mampiasa Internet na mila ny fomba fiarovana tsara indrindra?
Fantatro fa te ho voaro ianao satria vitsy ny olona, ​​izay tsy te hampiasa Internet. Noho izany, ho an'ireo olona rehetra te-hivezivezy amin'ny Internet soa aman-tsara dia nitondra ity rindrambaiko ity izahay. Hizara ny momba an'ity fampiharana ity izahay, hijanona miaraka aminay fotsiny.
Topimaso momba ny Ha Tunnel Pro App
Izy io dia rindrambaiko Android maimaimpoana, izay manolotra ny fiantohana ny fifandraisanao amin'ny fivezivezena amin'ny Internet. Manolotra izy hanova ny toerana misy anao, any amin'ny firenena hafa, na hatrany amin'ny kaontinanta hafa ary manolotra ny fanovana ny adiresy IP an'ny fitaovanao.
Ny teboka voalohany dia ny fiovan'ny toerana. Manolotra fomba hafa hanovana ny toerana izy io. Ny mpizara sasany dia natsangana tao anaty rafitra, izay azonao idirana amin'ny paompy tokana fotsiny. Raha te-hanafatra rakitra misy ianao dia manome anao fidirana amin'ireo rakitra manan-danja ihany koa izany.
The VPN manome seranana samihafa ho an'ny mpizara samihafa, izay mahatonga fifandraisana mety tsy tapaka. Izy io dia manolotra seranana dimy samihafa azonao idirana sy ovaina amin'ny fotoana rehetra, izay ahafahanao miditra amin'ny seranana samihafa amin'ny lohamilina mitovy.
Izy io aza dia manolotra anao hanova sy hihazona ny toe-tsainao mifandray, izay azonao atao ny manova ny toe-tsain'ny fifandraisana. Raha tsy zatra amin'ny fifandraisana ianao dia tokony hikasika fotsiny ny Internet Direct Connection, amin'ny alàlan'ny fidiranao azy rehetra.
Azonao atao koa ny manova ny fampandrenesan'ny fanovana amin'ny alalan'ny fihovitrovitra sy ny feo raha tapaka na mifandray amin'ny Internet amin'ny alalan'ity fampiharana ity. Io no fomba tsara indrindra ahafantarana fa mavitrika ianao ary malalaka amin'ny surf amin'ny fikasana.
Misy ihany koa ny lohahevitra samihafa mba hahatonga ny fampisehoana ho mahasarika kokoa. Azonao atao ny miditra sy manova lohahevitra amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny fanovana. Izy io dia manolotra lohahevitra telo samihafa ny voalohany dia ny lohahevitra default, izay mitovy amin'ny lohahevitra maivana. Ny lohahevitra maizina dia hafa, izay miavaka ary manolotra loko maizina.
anarana Ha Tunnel Pro
Anaran'ny fonosana com.hatunnel.pro
Endri-javatra manan-danja amin'ny Ha Tunnel Pro Vpn
Rehefa nizara ny sasany tamin'ireo fiasa taminao izahay rehetra ao amin'ilay faritra etsy ambony, saingy misy mihoatra noho izay azonao zahana amin'ny alàlan'ity fampiharana ity. Ao amin'ny lisitra etsy ambany dia hizara ny sasany amin'ireo lozisialy lehibe indrindra amin'ity fampiharana ity aminao rehetra izahay.
Izany dia maimaim-poana raha alaina sy ampiasaina.
Manome mpizara isan-karazany eran'izao tontolo izao izy io.
Ny seranana samihafa dia misy isaky ny mpizara.
Ny fifandraisana mety dia afaka miditra amin'ny Connection Moods.
Ny rakitra Import sy Export dia manolotra fidirana an-tanana amin'ny VPN manontolo.
Ny Interface dia sariaka amin'ny mpampiasa
Ahoana ny famaha Ha Tunnel Pro Apk?
Noho ny antony sasany dia tsy hita ao amin'ny Google Play Store izy io. Aza manahy fa hizara rohy miasa azo antoka sy miasa ho an'ity fampiharana ity izahay rehetra. Mila mikitika ny bokotra fampidinana fotsiny ianao, izay hita eo an-tampon'ny sy ity pejy ity.
Alohan'ny fizotry ny fametrahana dia aza adino ny mamela ny 'Loharano tsy fantatra' avy amin'ny fametrahana Security.
Ha Tunnel Pro dia fomba tsara hanafenana ny anao amin'ny Internet. Misy olona an-taonina maro, izay afaka mahazo ny mombamomba anao manokana sy matihanina, izay ampiasainy amin'ny hetsika tsy ara-dalàna. Noho izany, mijanona ho azo antoka amin'ny Internet amin'ny alàlan'ity fampiharana Android ity.
Sokajy Apps, Tools Tags Ha Tunnel Pro, Ha Tunnel Pro Apk, Ha Tunnel Pro App, VPN Post Fikarohana